Ballon D’or Afrikanina Hifaninana amin-dry Sadio Mané sy Mohamed Salah i Carolus
Anio alina no ho fantatra any Egypta izay mpilalao kitra afrikanina mendrika indrindra, sokajy lehilahy, senior, na “Ballon d’or africain” tamin’iny taona 2019.
Mbola tsy fantatra mazava moa ny ora higadonan’izay anarana tokana hanan-tantara izay saingy efa fantatra omaly kosa ny lisitr’ireo mpilalao 30 mirahalahy mety hisalotra io anaram-boninahitra io. Tafiditra ao anatin’ireo nofidiana tamin’izany ny anaran’ny lohalaharan’ny klioba divizionina voalohany ao Arabia saodita, El Adhal, Carolus Andriamahitsinoro na Carolus Andrea. Teratany no sady mandrafitra ny ekipam-pirenena Malagasy na Barean’i Madagasikara ihany koa ny tenany. Na dia sambany aza no nisy teratany Malagasy nofidiana hahazo ity anaram-boninahitra ity dia azo lazaina ho marika goavana amin’ny fandrosoan’ny baolina kitra Malagasy izany. ilay alzerianina, Mahrez, sy ilay senegaley, Sadio Mane, ary ilay ejipsianina, Mohamed Salah kosa no anarana azo lazaina ho kalaza indrindra ary tombanan’ny mpanara-baovao hahazo izay Ballon d’or afrikanina izay.